Ipulazi lase-Chale Bay - Ukubukwa kwe-Purbeck - I-Airbnb
Ipulazi lase-Chale Bay - Ukubukwa kwe-Purbeck
Ngo-105 Mbps, ungashaya izingcingo zevidiyo futhi udlalele lonke iqembu amavidiyo.
I-Purbeck View e-Chale Bay Farm iyifulethi elinomoya oshisayo, elilungele umndeni elinokubukeka okusuka olwandle.
Indawo yokuhlala inohlelo lwesimanje oluvulekile, ikhishi elinakho konke/i-diner elinehhavini, i-hob, i-microwave, ifriji, i-freezer, umshini wokuwasha izitsha kanye nomshini wokuwasha/wokomisa kanye negumbi lokuphumula elinomoya oshisayo/ikamelo elinomabonakude enkulu.
Ilala kuze kube ngu-4 (noma 5 ngombhede owusofa noma indlwana) kodwa ungafaka isikhala esengeziwe ngokubhukha ikamelo lethu elizimele i-Tennyson View noma elinye noma ngaphezulu kwamanye amafulethi ethu aseduze.
Ukufika, unokukhetha okuningi kokupaka kwamahhala epaki lethu elihle lemoto ngaphambi kokungena efulethini lakho ngomnyango wayo wangaphambili ovela egcekeni lethu elinengadi yamanzi enokuthula kanye nesiziba.
Indawo yokuhlala inohlelo lwesimanje oluvulekile, ikhishi elinakho konke elinohhavini, i-hob, i-microwave, ifriji, i-deep freezer, umshini wokuwasha izitsha kanye nomshini wokuwasha ohlangene/i-umble dryer nendawo yokudlela eseduze (enosofa omncane/i-sofa-bed) kanye negumbi elikhulu elinomoya oshisayo/indawo yokuphumula enosofa ababili abakhulu, itafula lekhofi namatafula aseceleni kanye nefenisha.
Indawo yokuthamela ilanga/indawo yokuphumula inosofa abantofontofo kanye ne-TV engu-58 " HD/i-inthanethi exhunyiwe enamakhulu eziteshi ze-Freesat futhi usebenzisa izici ze-Smart TV ungasebenzisa futhi ama-catchup-services afana ne-iP iPlayer futhi usebenzise amasevisi okustrima ahlanganisa i-YouTube, i-Netflix, i-Amazon Video ne-Brit (i-akhawunti edingekayo). Isidlali se-Bluetooth naso sinikezwa futhi ama-DVD nama-disbon ayatholakala emtatsheni wezincwadi ohlala e-Gym.
Ikamelo lokulala eliyinhloko eline-air-conditioned linombhede oyinkosi ophindwe kabili onezinto zokulala zikakotini zaseGibhithe, isihlalo sesikhumba, usofa, itafula eliseceleni kanye nekhabethe elikhulu nendawo yokugezela enendawo yokugezela enobungako obuhlanganisa ubhavu ogcwele oneshawa onamandla, isitimela esinamathawula afudumele kanye nomshini wokomisa izinwele. Kukhona ne-hairdryer ephethwe ngesandla ediloweni lokugqoka. Ukuze sikuvuselele ngesikhathi ukuze ulusebenzise ngokugcwele usuku lwakho kukhona iwashi le-DAB/i-alamu elinokuxhumeka kwe-iPod/i-iPhone dock/i-MP3. Ikamelo lokulala liphinde libe ne-40 " HD Setilaiti TV kanye nesidlali se-smart Bluetooth esinezindawo zokustrima.
Ikamelo lesibili lisesitezi se-mezzanine elifinyeleleka ngezitebhisi (akukho mnyango phakathi) kusuka ekamelweni elihamba phambili ngaphakathi kwekamelo linemibhede emibili egcwele kanye nendawo yokuphumula enosofa omncane/usofa-bed kanye netafula lekhofi kanye ne-TV yesibili enezindawo zokustrima nesidlali se-bluetooth. Izihlalo eziphakeme, amasango ezitebhisi nezindlwana zokuhamba ziyatholakala ngaphandle kwenkokhiso eyengeziwe (ukuhlinzeka ukuthi ziceliwe ngesikhathi sokubhukha). Sicela uqaphele ukuthi asinikezi izinto zombhede zezindlwana zokuhamba.
Umbhede owusofa kule ndawo yaphansi ye-mezzanine ungavuleka uma kunesivakashi sesihlanu (sivame ukusikisela ukuthi umbhede wesofa usetshenziselwa izingane kuphela) - sicela uqaphele ukuthi lokhu kunciphisa indawo yaphansi etholakalayo. Isengezo esincane siyasebenza.
Ngaphandle, ngeminyango emikhulu evuleke kabili unendawo yakho siqu yaseningizimu-ntshonalanga ebheke i-patio enetafula elikhulu lepikiniki futhi iya phezulu otshanini nokubukeka okuhle ngokuqondile emasimini nangaphandle kolwandle futhi nasenyakatho ngasentshonalanga ukuya ngasogwini. Ukuhambahamba endlini uyakwazi ukungena otshanini obuhlanganyelwayo futhi kusukela entwasahlobo kuze kufike ekwindla ku-paddock kufaka phakathi ibhokisi lemidlalo yotshani ehlanganisa i-croquet, ikhilikithi ne-frisbee, kanye namabhola azo zonke izinhlobo nobukhulu.
Kukhona uxhumano lwe-inthanethi lwamahhala olunikezwa ngokufinyelela kwe-WiFi okusebenzayo okutholakala kuyo yonke indlu.
Ukuze uthole ukuphepha okwengeziwe kunesiphephelo esikhulu ngokwanele sokuhlalisa ama-laptop amaningi.
I-Chale Bay Farm iseduze nayo yonke i-Isle of Wight - ungafinyelela cishe noma kuphi esiQhingini lingakapheli ihora. Kukhona i-pub enhle yokuhamba ibanga elifushane futhi i-Blackgang Chine yimizuzu emithathu nje yokushayela.
Ukufinyelela kuphephile ngokhiye, nakuba nathi sihlala esayithini futhi sihlanganyela nenkampani yokuphatha ukusiza nganoma yimiphi imibuzo noma izinkinga, futhi siyatholakala isikhathi esiningi uma kwenzeka kuba nesimo esiphuthumayo.
Sinikeza izivakashi indawo yazo kodwa uma ufuna ukuthi "sawubona" lapho ufika sizojabula ukukubonisa ifulethi mathupha.
Ukufinyelela kuphephile ngokhiye, nakuba nathi sihlala esayithini futhi sihlanganyela nenkampani yokuphatha ukusiza nganoma yimiphi imibuzo noma izinkinga, futhi siyatholakala isik…